色即是空3 qvod全文免费阅读 色即是空3 qvod E道阅读网,夜夜爱 全文免费阅读 第35页 E道阅读网,china男男同志版中文版 最新章节免费阅读无弹窗 E道阅读网
色即是空3 qvod全文免费阅读 色即是空3 qvod E道阅读网,夜夜爱 全文免费阅读 第35页 E道阅读网,china男男同志版中文版 最新章节免费阅读无弹窗 E道阅读网色即是空3 qvod全文免费阅读 色即是空3 qvod E道阅读网,夜夜爱 全文免费阅读 第35页 E道阅读网,china男男同志版中文版 最新章节免费阅读无弹窗 E道阅读网
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန်ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
က ခ ဂ ဃ င စ ဆ ဇ ဈ ဉ|ည ဋ ဌ ဍ ဎ ဏ တ 色即是空3 qvod全文免费阅读 色即是空3 qvod E道阅读网,夜夜爱 全文免费阅读 第35页 E道阅读网,china男男同志版中文版 最新章节免费阅读无弹窗 E道阅读网 ထ ဒ ဓ န
ခရစ်စမတ်သီချင်းတစ်ပုဒ်(အင်္ဂလိပ်:A Christmas Carol) သည် ချားလ် ဒစ်ကင်းရေးသားသောလုံးချင်းဝတ္ထုတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်၍ နာမည်အပြည့်အစုံမှာ A Christmas Carol. In Prose. BeingaGhost Story of Christmas ဖြစ်သည်။ ဂျွန်လိချ်က သရုပ်ဖော်ရေးဆွဲပေး၍ ၁၈၄၃ တွင် ချပ်မန်းနှင့် ဟောလ် (Chapman & Hall) စာပေထုတ်ဝေရေးက ပထမဆုံးဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဤဝတ္ထုသည် "အဘန်နဇာ စခရုဂျ်"(Ebenezer Scrooge) ၏ ဇာတ်လမ်းဖြစ်၍ စခရုဂျ်သည် ကပ်စေးနဲကော်တရာလူစား ဖြစ်ကာ ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် "ဂျေးကာ့ဘ် မားလီ" (Jacob Marley) ကွယ်လွန်အပြီး ခုနှစ်နှစ်မြောက်တွင် ဘဝပြောင်းသွားပြီဖြစ်သော မားလီက တစ္ဆေဘဝဖြင့် လာရောက်တွေ့ဆုံပြီး ယင်းနောက် အတိတ်ခရစ်စမတ်တစ္ဆေ၊ မျက်မှောက်ခရစ်စမတ်တစ္ဆေ၊ အနာဂတ်ခရစ်စမတ်တစ္ဆေ စသည်တို့ကလည်း လာရောက်တွေ့ဆုံကြသည့် ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့လာရောက်တွေ့ဆုံမှုများအပြီး စခရုဂျ်သည် ကြင်နာစာနာတတ်သော၊ နူးညံ့သောသူအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့လေသည်။
၈ နိုဝင်ဘာ၂၀၂၀ – ၂၀၂၀ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကို နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၃ နိုဝင်ဘာ၂၀၂၀ – ၂၀၂၀ ခုနှစ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် ဂျိုး ဘိုင်ဒင်နှင့်ကားမလာ ဟဲရစ်တို့ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
၂၅ နိုဝင်ဘာ၂၀၂၀ တွင် ဘောလုံးသမိုင်း၌ ၂၀ရာစု၏ အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားနှစ်ဦးအနက် တစ်ဦးဖြစ်သော အာဂျင်တီးနားသား ဒီယဲဂို မာရာဒိုနာသည်နှလုံးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
ယနေ့ အထူးဓာတ်ပုံ色即是空3 qvod全文免费阅读 色即是空3 qvod E道阅读网,夜夜爱 全文免费阅读 第35页 E道阅读网,china男男同志版中文版 最新章节免费阅读无弹窗 E道阅读网
မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားသည်မဏ္ဍိုင်ငါးခု (နိယာမ ၅ ခု) ရှိပါသည်။
စမ်းသပ်ကြည့်လိုလျင်ဤစာမျက်နှာကို သုံးပြီး စာမျက်နှာတည်းဖြတ်မှုကို စမ်းသပ်နိုင်ပါသည်။
အခြား အကြံပေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းများအတွက် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယား လက်ဖက်ရည်ဆိုင်(သို့)မြန်မာဝီကီ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် ဝင်ရောက် ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။
စီးပွားရေး •နိုင်ငံရေး •ပညာရေး •ပထဝီဝင် •ဘာသာစကားများ •ယဉ်ကျေးမှု •လူမျိုးများ‎ •သမိုင်း‎‎ •အတ္ထုပ္ပတ္တိ‎ •အုပ်ချုပ်ရေး‎
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး •ဆေးပညာ •ဆေးများ •ရောဂါ
ခရစ်ယာန် •ဂျိန်း •ဂျူး •ဆစ်ခ် •ဗုဒ္ဓ •ဟိန္ဒူ •အစ္စလာမ်
ဇီဝဗေဒ •ဓာတုဗေဒ •‎နက္ခတ္တဗေဒ •ဘူမိဗေဒ •ရုက္ခဗေဒ •ရူပဗေဒ •သတ္တဗေဒ
ကဗျာ‎‎ •‎ဂီတ‎‎ •ဂိမ်းများ‎‎ •‎စာပေ‎‎ •‎ဖျော်ဖြေရေး •‎ရုပ်ရှင်‎ •‎ပန်းချီ •‎ပြတိုက်များ‎‎ •‎ပွဲတော်များ •ဗိသုကာ‎‎ •‎ဘာသာစကား •အနုပညာ •‎အားကစား
ကွန်ပျူတာ •ဆက်သွယ်ရေး •ဆော့ဖ်ဝဲလ် •သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး •အီလက်ထရွန်းနစ် •အင်ဂျင်နီယာ
ဂြိုဟ် •ကမ္ဘာ •တိုက် • (တောင်အမေရိက •မြောက်အမေရိက •အာဖရိက •အာရှ •အန္တာတိက •ဥရောပ •ဩစတြေးလျ) •အိုရှန်းနီးယား •တောင်များ •နိုင်ငံ •ပင်လယ် •မြစ်များ •မြို့များ •ရေထု •ရေကန်များ
မနုဿဗေဒ •ပညာရေး • (ကျောင်း •ကောလိပ် •တက္ကသိုလ်) •လူ့ဘဝ •မိသားစု •သဘာဝတ္ထဗေဒ •ဒဿနပညာ •ဘာသာဗေဒ •ဥပဒေပညာ •လူမျိုး •လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း •နိုင်ငံရေး
ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ •ကျောက်ခေတ် •ရေခဲခေတ် •သံခေတ် •ရှေးဟောင်းအီဂျစ် •အမှောင်ခေတ် •အလယ်ခေတ် •ရီနေဆွန်းခေတ် •ဗြိတိသျှအင်ပါယာ •ပထမကမ္ဘာစစ် •ဒုတိယကမ္ဘာစစ် •မြန်မာ့သမိုင်း •စစ်အေးတိုက်ပွဲ
ဤဝီကီပီးဒီးယားကိုမြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားထားပါသည်။ ၂၀၀၄ (၂၀၀၄) ခုနှစ်မှ စတင်၍ ယခုအခါ အကြောင်းအရာပေါင်း ၁၀၀၀၆၇ ခုရှိပါသည်။
色即是空3 qvod全文免费阅读 色即是空3 qvod E道阅读网,夜夜爱 全文免费阅读 第35页 E道阅读网,china男男同志版中文版 最新章节免费阅读无弹窗 E道阅读网Tiếng Việt
色即是空3 qvod全文免费阅读 色即是空3 qvod E道阅读网,夜夜爱 全文免费阅读 第35页 E道阅读网,china男男同志版中文版 最新章节免费阅读无弹窗 E道阅读网 ရှာဖွေရန်